ဒီကာလဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း မှန်ကန်စွာနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း..။ - JAPO Japanese News
ကြာ 08 Apr 2021, 15:12 ညနေ
တိုကျိုမြို့ ဘူတာရုံအတွင်းရှိစက်လှေကားမှာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ခန့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး သူမရဲ့ဆံပင်ကိုဓါးကဲ့သို့သောအရာဖြင့်ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သံသယကြောင့်၊ မြန်မာလူမျိုးအမျိုးသားတစ်ဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်မဖြစ်နိုင်သောစိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ ဒီလိုလုပ်မိသွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့၊ ယခုသူဟာ “ မမှတ်မိဘူး” လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ဆံပင်ကိုညှပ်ဖြတ်ချင်လာတဲ့ခံစားချက်ကို နားမလည်နိုင်သလို၊ “ မမှတ်မိတော့ဘူး” ဆိုတဲ့သဘောထားမှာလည်း ပြဿနာကြီးရှိနေတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေထဲမှာကျရောက်နေပြီး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံတွေဆီကအကူအညီကို လိုအပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်သွားနေတုန်းမှာပဲ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီလိုအမှုကို ကျူးလွန်လိုက်မယ်ဆိုရင်…..
လူတွေမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသီးသီးကွဲပြားကြတာကြောင့်၊ ကျားမ, အသက်အရွယ်, လူမျိုးနွယ်စု စသည်ဖြင့် အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချသင့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အားလုံးမှာရော ဒီလိုခံစားမှုမရှိဘူးလား?
ဂျပန်လူမျိုးတွေကတော့ ဒီလိုလူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုးကတော့ ဒီလိုလူမျိုး… ဆိုပြီးစုစည်းပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ်.
ဂျပန်လူမျိုးထဲမှာရော၊ တရုတ်လူမျိုးထဲမှာပါ ကောင်းသူရော၊မကောင်းသူပါ ရှိပါတယ်။
ဒါကိုတောင်မှ တရုတ်ကတော့မကောင်းဘူး၊ ဂျပန်ကတော့ကောင်းတယ် အစရှိသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေ အများကြီးရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးပါလို့ အလေးအနက်တောင်းဆိုနေသောမြန်မာလူမျိုးတွေရှိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ရှေ့မှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့သောနေ့က ကျွန်တော်လည်းသွားပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီလိုကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေရှိတဲ့အထဲမှာ၊ မသင့်‌တော်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုကျူးလွန်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ကြောင့် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမကျဆင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဂျပန်မှာတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို “ 国辱（こくじょく）အမျိုးသားအရှက်” လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရဲ့အာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ယခုလိုအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း၊ လူမျိုးကိုအရှက်မရစေဖို့၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ ဆန္ဒပြမှုကနေအဓိကရုဏ်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ လုယက်မှုတွေပါအစပြုလာကြတယ်ဆိုတာကို သတင်းစောင့်ကြည့်နေသူအားလုံးသိကြတယ်နော်…
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူတွေက မြန်မာလူမျိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြီး စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
Mamaya ရဲ့ဟင်းချက်နည်းသင်ခန်းစာအပိုင်း ၁ !!!!